Imbali yeeLanga zeFluorescent kunye neLampu
Inventors: UPeter Cooper Hewitt, u-Edmund Germer, uGeorge Inman noRichard Thayer
Izibane kunye nezibane zaveliswa njani? Xa abaninzi abantu bacinga ngokukhanyisa nezibane, bacinga nge- bulb light incandescent eyenziwe nguTommas Edison kunye nabanye abaqambi. Izibane ze-incandescent zisebenza ngokusebenzisa umbane kunye ne-filament. Ukufudumala ngombane, i-filament ngaphakathi kwibhebhu yokukhanya ibonisa ukunganyangeki okubangela ukushisa okuphezulu okubangela ukuba i-filament ikhanyise kwaye ikhuphe.
I-Arc okanye izibane zomoya zisebenza ngendlela eyahlukileyo (i-fluorescents iwele phantsi kweli candelo), ukukhanya akudalwanga kwintsholongwane, ukukhanya kudalwe kwiimpendulo zamakhemikhali ezenzekayo xa ugesi isetyenziselwa iigesi ezahlukileyo ezifakwe kwigumbi lokucoca kwiglasi.
Ukuphuhliswa kwezibane ze-Fluorescent
Ngo-1857, isiFulentshi yeFrench uAlexandre E. Becquerel owayephanda i-phenoena ye-fluorescence kunye ne-phosphorescence echazwe malunga nokwakhiwa kweethubhu ze-fluorescent ezifana nezo zenziwe namhlanje. UAlexandre Becquerel wazama ukugaya izixhobo zokukhupha zombane ngezinto ezikhanyisayo, inkqubo eyaqhutyelwa phambili kwiimbane ze-fluorescent ezizayo.
UMelika uPeter Peter Cooper Hewitt (1861-1921) onelungelo lobunikazi (i-patent yase-US 889,692) isibane sokuqala se-mercury esiphezulu se-vapor isibane ngo-1901. Isibane esiphezulu soxinzelelo lwe-mercury sika-Peter Cooper Hewitt ngumboniso wokuqala wokukhanya kwezibane zanamuhla. Ukukhanya kwe-fluorescent luhlobo lwesibane sombane eshukumisa umphunga we-mercury ukudala i-luminescence.
I-Smithsonian Institute ithi uHewitt wakhiwa ngomsebenzi we-German physicist uJulius Plucker kunye no- Heinrich Geissler . La madoda mabini adlula umbane wamandla ngeglasi yeglasi ephethe ixabiso elincinci legesi kwaye lenze lula. U-Hewitt wasebenza ngeibhubhu ezizaliswe nge-mercury ngasekupheleni kwee-1890 kwaye zafumanisa ukuba zanikezela ubuninzi kodwa zingabonakali ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka.
U-Hewitt wayengacingi ukuba abantu bafuna izibane nge-blue-green light emakhaya abo, ngoko wafuna ezinye iifowuni zazo kwii-studios zeefoto kunye nokusetyenziswa kwezonyango. UGeorge Westinghouse kunye noPeter Cooper Hewitt bamisela i-Westinghouse elawulwa yi-Cooper Hewitt Electric Company ukuvelisa izibane zokuthengisa ze-mercury zokuqala.
UMarty Goodman kwi-History of Electric Lighting uthi u-Hewitt uyayilungisa isibane sokuqala se-arc-type esebenzisa umphunga wensimbi ngo-1901. Ngomnyaka we-1934, u-Edmund Germer wadala isibane esiphezulu se-arc esibangela ukulawula amandla amaninzi kwindawo encinane. Ithenda ye-arc ye-arch ye-arch-pressure yecala yokunciphisa i-low-voltage ikhuphe inani elikhulu lokukhanya kwe-ultraviolet. I-Germer nabanye bavutha ngaphakathi kwibhebhi yokukhanya eneekhemikhali ze-fluorescent ezithatha ukukhanya kwe-UV kwaye zatshintshisa kwakhona amandla njengokuba kukhanya okubonakalayo. Ngale ndlela, yaba ngumthombo okhanya kakuhle.
U-Edmund Germer, uFriedrich Meyer, uHans Spanner, u-Edmund Germer - iLatente yeFluorescent Patent US 2,182,732
U-Edmund Germer (1901 - 1987) waqulunqa isibane esiphezulu sompompo, ukuphuhlisa kwakhe isibane sokuphucula i-fluorescent kunye nesibane esiphezulu sokunyusa i-mercury-vapor isibane esivunyelwe ukukhanya okungakumbi kwezoqoqosho kunye nokushisa okuncinane.
U-Edmund Germer wazalwa eBerlin, eJamani, kwaye wafundiswa kwiYunivesithi yaseBerlin, efumana udokotela ekukhanyiseni iteknoloji. Kanye noFriedrich Meyer noHans Spanner, u-Edmund Germer wabonisa isithwaba se-fluorescent esilinganiselwa ngo-1927.
U-Edmund Germer uvakaliswa ngabalo-mbali bezembali njengokuba ngumvelisi wesibane sokuqala se-fluorescent. Nangona kunjalo, kungatsholwa ukuba izibane ze-fluorescent zineembali ende zentuthuko phambi kweGermer.
UGeorge Inman noRichard Thayer - ILampu yokuqala yeFluorescent yezorhwebo
UGeorge Inman ukhokele iqela le-General Electric ososayensi ngokuphanda ngesitampu esiphuculweyo kunye nesisetyenziswayo. Ngaphantsi kweengcinezelo ezivela kwiinkampani ezininzi ezikhuphisanayo iqela lenzelwe isibane sokuqala esisebenzayo nesilungileyo (isibonakaliso se-US No. 2,259,040) esasithengiswa kuqala ngowe-1938. Kufuneka kuqatshelwe ukuba iGenerali yamandla ithenge amalungelo angamalungelo olungelo lobunikazi ku-Patmund Germer's earlier patent.
Ngokwama-Pioneers aseLu GE Fluorescent, " Ngomhla ka-Oktobha 14, 1941, i-US Patent No. 2,259,040 yakhishwa kuGeorge E. Inman; umhla wokufayilila ngomhla ka-Apreli 22, 1936. Ngokuqhelekileyo ibonwa njengelungelo lobunikazi. Iinkampani zasebenza kwi sibane ngexesha elifanayo ne-GE, kwaye abanye abantu babesele bafaka i-patent. I-GE yomeleza isikhundla sayo xa ithenge i-patent yaseJamani eyayingaphambi kwe-Inman. UMeyer, uHans J. Spanner, kunye no-Edmund Germer. Nangona umntu angatshitshisa umqambi wangempela wesibane se-fluorescent, kucacile ukuba i-GE yayingowokuqala ukuyizisa. "
Abanye abaqulunqi beelwimi zezibane zefowuni, kuquka uTomas Edison. Wafaka i-patent (i-US Patent 865,367) ngo-Meyi 9, 1896, kwisitrato sombane esingazange sithengiswe. Nangona kunjalo, akazange asebenzise i-mercury vapor ukuze athabathe i-phosphor. Isibane sakhe sisetyenziswe x-ray.
Ubani Oya Kukhusela Ingonyango Yeenwele Ezinombala?
5 I-Apps Great for Costume kunye nabaCwangcisi beFashion
IYunivesithi yaseWest Florida Admissions
Abadlali abakhulu kwi-Revolution Cuban
Umthandazo kuDade wakho